Deeq dawo ah oo la gaarsiiyay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Benaadir – Radio Muqdisho
Deeqdan dawada ah oo la gaarsiyay cisbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Benaadir ayaa waxaa gaarsiiyay hay’adda Hormuud Foundation, kaasi oo ay ugu talagashay in lagu daaweeyo bukaannada ku jira cisbitaalka oo ay ka mid yahiin dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo ka dhashay biyo sumeysan oo ay cabeen.
Guddoomiye ku-xigeenka hay’adda Hormuud Foundation Cumar Salaad Faarax oo Warbaahinta kula hadlay cisbitaalka Benaadir ayaa sheegay in deeqda dawada ah u ugu talagaleen in lagu dabiibo bukaannada ku jira cisbitaalka, isagoo intaa ku daray in ay sii wadayaan wax u qabashada dadka liita.
Madaxa caafimaadka cisbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka Dr Cabdirisaaq Xasan Cali ayaa tilmaayay in dawadani ay ku soo beegantay xili ay u baahanyeen, ayna uga mahadceliyaan mas’uuliyiinta Hormuud Foundation.
Dr Cabdirisaaq ayaa xusay in qaar ka mid ah bukaanadii uu dhawaan soo ritay cudurka shuban biyoodka ay iminka soo hagaageyso xaaladooda caafimaad, ayna jiraan kuwa kale oo lagu dabiibayo cisbitaalka.
Tartan Ciyaareed oo lagu soo gabagabeeyay degmada Hodon